TOP9ZAPYA Android app မှ Alternative 2018 (APK များ)
mujeer နိုဝင်ဘာလ 15, 20170မှတ်ချက်များ
Zapya play စတိုးကနေပေးရမညျလူကြိုက်အများဆုံးဟာ android App ဖြစ်ပါတယ်, in this post gladly sharing you for TOP9ZAPYA Android app မှ Alternative 2018 (APK များ), သင်သည်သင်၏ android မိုဘိုင်းအတွက်လိုအပ်သော may, သင့်မိုဘိုင်းဘာတစ်ခုမှအခြား Device ကိုမှ GB ကိုဖိုင်လွှဲပြောင်းလိုအပ်သင့်ပါတယ်? ဟုတ်ကဲ့သင်လာဟာ android Zapya APK များကိုယူစေခြင်းငှါ အကယ်. 2018 in play store. Start using Zapya for sharing larger files i.e., 1 GB အထိသို့မဟုတ်2GB ကိုနှင့်သင်ကက USB ထက်လမ်းပိုမြန်ကြောင်းသတိထားမိပါလိမ့်မယ် 2.0 TOP 10 ALTERNATIVES TO ZAPYA ANDROID ဆက်ဖတ်ရန် [...]
ထိပ်တန်း 10 အခမဲ့များအတွက် WordPress ကိုပရီမီယံ Theme ဒေါင်းလုပ် (null မပါဘဲ)
ယနေ့တွင်ငါသည်သင်တို့ကိုအခမဲ့သည် WordPress ကိုပရီမီယံ Theme ဒေါင်းလုပ်နှင့်အတူမျှဝေဖို့ဝမ်းသာပါတယ်, ဧဝံဂေလိအခမဲ့အဘို့ဤပရီမီယံဆောင်ပုဒ်ကို download ဖြစ်ပါသည် (null မပါဘဲ) The News willing theme did just click the download button doesn't go to another page open, automatically downloading now on my wikiwon page you may try don't forget comment. ကျနော်တို့ကိုအလွယ်တကူလည်းမြန်နှုန်းကောင်းသောဒေါင်းလုပ်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် drive ကိုဖိုင်လိုအပ်ပါတယ်ရမယ်. ထိပ်တန်း 10 အခမဲ့များအတွက် WordPress ကိုပရီမီယံ Theme ဒေါင်းလုပ် 1. MStore Pro - Complete React Native template for e-commerce This ဆက်ဖတ်ရန် [...]
5 ငွေသို့မဟုတ်ငွေအပ်ငွေနှင့်အတူ Bitcoin Buy ရန်လမ်း (ကမ္ဘာ့ဖလား)
How to Buy Bitcoins with Cash or Cash Deposit In order to purchaseaBitcoin (သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို), Buy Bitcoins with Cash or Cash Deposit the user needs to go toaBitcoin exchange that deals in their own fiat tender (အမှန်တကယ်ငွေကြေး). Bitcoin image ကိုအောက်ပါထွက်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး, Learn how to buy bitcoins for the first time, လက်ျာပိုက်ဆံအိတ်နှင့်ကူးလူးဖလှယ်မှုကနေအသုံးစရိတ်ဖို့စမတ်လမ်း Bitcoin.5ငွေသို့မဟုတ်ငွေအပ်ငွေနှင့်အတူ Bitcoin Buy ရန်လမ်း (ကမ္ဘာ့ဖလား) 1. LocalBitcoin In order ဆက်ဖတ်ရန် [...]
လူတွေ DARAZ အချစ် ALIEXPRESS နျးဘာကြောင့်လဲ
People excited to wanna purchase any item in ALIEXPRESS couldn't Daraz, Million People hate Daraz love ALIEXPRESS, Daraz would wild website, ALIEXPRESS also world wild, but ALIEXPRESS sell any item from China, ကို item အိမ်မှာအခြားတိုင်းပြည်ထုတ်ကုန်ယူတူတရုတ်ကလူထံမှလာ. HATE DARAZ LOVE ALIEXPRESS ALIEXPRESS give you best quality product to different Daraz, Daraz ထုတ်ကုန်ပါကစ္စတန်ကနေလာ, Pakistani person wanna take the best product from China like another country item is ဆက်ဖတ်ရန် [...]
နိုဝင်ဘာလ 14, 20170မှတ်ချက်များ
As day by day technology is getting upgraded, there is seenagreat impact on the world reform. Many of the information is regulated and broadcasted by the social platform which in turn has turned out to beagreat platform to explore. When talking fromacompany point of view, many organizations have adopted this platform to showcase their products and service and makeaplace in the minds of consumers. This platform also makes organizations grow the brand visibility and online presence in the corporate ဆက်ဖတ်ရန် [...]
Google Play စတိုးကဘာလဲ? | ငါက Google store မှာ Play လိုအပ်ပါသလား?
mujeer နိုဝင်ဘာလ 13, 20170မှတ်ချက်များ
တွင် Google Play စတိုး6မတ်လ 2012 Google က Store ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည် Play. ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြန့်ဖြူးဝန်ဆောင်မှုကိုခေါ် Google play စ. Google က Store ကို operated နှင့် Google ဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီး Play. အသုံးပြုသူများအတွက်, က Android ပေါ်မှာ applications များဒေါင်းလုပ်ဆွဲခွင့်ပြု. ရရှိနိုင်ဂီတလည်းရှိပါတယ်, မဂ္ဂဇင်း, စာအုပ်များ, ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များနှင့်ရုပ်ရှင်. အပေါ် 11 မတ်လ 2015, သူတို့က Google ဟာ့ဒ်ဝဲ device များပူဇော်တယ်. အန်းဒရွိုက်တွင်, ပြဇာတ်စတိုးကနေ, ကတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်. ၏အဖြစ် 2016 အသုံးပြုသူများအကျော်ဒေါင်းလုတ်လုပ် 82 ဘီလီယံကို apps များပေမယ်ခုနှစ်တွင် 2017 က ဆက်ဖတ်ရန် [...]
Android App များ, အသားပေး